Internetka isha ugu muhiimsan ee dadka Sweden xogta ka helaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Algoritmer ayaa go'aamiyaha macluumaadka qof ka helayo. sawir: Anders Wiklund/TT
Internetka isha ugu muhiimsan ee dadka Sweden xogta ka helaan
Internet isha ugu muhiimsan
La daabacay torsdag 10 november 2016 kl 13.47
Internet ayaa hadda ah isha ugu muhiimsan ee dadka Sweden xogta ka helaan. Sidaas waxaa muujiyey baaritan lagu sameeyey sida dadka Sweden u adeegsadaan internet-ka oo maanta la shaaciyey.
Måns Jonasson oo u qaabilsan dhanka digitalka ururka Internetstiftelsen i Sverige oo ah ururka sameeyey baaritaanka ayaa sheegay in farqi weyn u dhaxeeya da’aha iyo isticmaalka internetka.
– Farqiga waxuu ka bilowdaa da’ada 50ka. Qof da’diisu ka hooseyso 50 waxuu aaminsan yahay internetka in ay tahay isha ugu mhiimsan ee uu xogta iyo wararka ka helo, halka dadka da’dooda tahay16-25 ay internetka muhiim gaar siinayaan markey timaado isha ugu muhiimsan ee ay xogta ka helaan, balse dadka da’dooda 50ka ka weyn tahay waxay qiimeeyaan meediyaha caadiga ah.
Meediyahas caadiga ee dadka 50ka weyn qiimeyaan waa telefishinka, raadiyaha iyo wargeysada ayuu yeri Måns Jonasson.
Laakiin internet-kaba waa laga helaan wararka iyo xogaha meediyaha caadiga ah, inkasta oo qof xog ka raadsada internetka iyo sociala media uu la kulmayo warar ay dhaci karto xaqiiqa in ay ka fogyahiin. Balse da’yarta 16-25 jirka ah ayaa faceebook u arka in halka ugu muhiimsan ee ay wararka ka helaan, kana muhiimsan wargeysyada, teleshinada iyo raadiyaasha. Balse Marie Grusell oo ah cilmi baare dhanka meediyada ayaa u aragta qofka in uu waxa caalamka ka socda doodaha kalo socdo Facebook mid khasaaro iyo faa’idoba leh.
– Dhan marka laga fiiriyo waxuu helayaa fursado badan oo wararka caalamka ku heli karo basle dhanka kale ee laga wanaagsan yahay waxay tahay in qofka uu helayo wararka uu xiiseeyo keliya o waxaa maamulaya waraka uu helayo algoritm-yo.
In qofka warka uu helayo ama boggiia facebook ku arkayo ay maamusho xiisaabta uu ku shaqeeyo kombiyuuterka waa wax cusub oo u baahan qofka in uu mowqif ka qaato, ayuu yeri Mån Jonasson
– Waxaa aamisnaahay in dad abdan u baahan yahiin in ay fahmaan algoritm waxa uu yahay iyo sida ay barogramyada kumbiyuuter ee noocaan ah u maamulaan macluumadka uu qofka helayo.
– Waa arrin aysan dad badan ka warqabin oo cusub balse loo baahan yahay in la fahmo sida ay u shaqeyso kadibna qof uu go’aasado sida uu ka yeelayo, ayuu yeri Måns Jonasson.